5200mah Jaket Dị ọkụ China Manufacturers & Suppliers & Factory
5200mah Jaket Dị ọkụ - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka 5200mah Jaket Dị ọkụ)
Fọg Na Na Na Na Na Na Na Na 7.4V / DC Atụmatụ: 1. Nwee ikpo ọkụ jupụtara na fatịlaịza 7.4V / DC nwere ọrụ nke okpomoku; Ọ dịghị nnukwu radiation; 2. Nchebe na nrụgide dị ala; 3. Ndozi onu mmiri; 4. Ngwaahịa dị elu nwere ụdị dịgasị iche iche na ngbanwe nke obosara, wdg .; 5. Ngwaahịa dị elu na ahụ mmadụ ọ bụla akara...
5200mah Jaket Dị ọkụ 5200mah jaket dị ọkụ 2300ma Lithium batrị ọkụ Insole Pads dị ọkụ Amazon Pet Pad ọkụ Ụlọ Nkesa dị ọkụ Nlekọta ahụike dị ọkụ Ihe ọkụkụ dị ọkụ